रुपन्देहीका १ लाख ६३ हजार घरमा चर्पी निर्माण ! - Everest Dainik - News from Nepal
रुपन्देहीका १ लाख ६३ हजार घरमा चर्पी निर्माण !
रुपन्देही जिल्लाका १ लाख ६३ हजार ८ सय ६३ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएसँगै ११ वर्षअघि सुरु भएको अभियानले पूर्णता पाउने भएको छ । जिल्लालाई शुक्रबार एक समारोहका बीच खुला दिसामुक्त घोषणा गरिदैछ ।
२०६४ सालमा अभियान थालेपछि ९० हजार १ सय ९ वटा घरमा शौचालय बनाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यलयका प्राबिधिक ईश्वरी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस रुपन्देहीमा निर्वाचनको रौनक
‘अभियानले सार्थकता पाउदैछ,हामी सबैले यस्मा योगदान गर्नुपर्छ,कार्यान्वयन अझै महत्वपूर्ण कुरा हो’ उनले भने ।
रुपन्देही जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला समन्वय समितीको रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
लुम्बिनीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछन् ।
विश्वकर्माले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारलाई सरसफाइमा पूर्ण बनाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागी समन्वय समितिले पहल गरिरहेको बताए ।
प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा प्युठान पहिलो पटक खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो ।
रुपन्देही देशका ७७ जिल्लामा खुल्ला दिसामुक्त हुने ६१ औं जिल्ला हो ।
याे पनि पढ्नुस रुपन्देहीमा विष्णु पौडेल दोब्बर मतले अगाडि
एक घर एक चर्पी योजना अनुसार जिल्लामा सबै घुरधुरीले शौचालय बनाएको पश्चिमाञ्चल ग्रामीण खाने पानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका विपिन पौडेलको भनाइ छ । कामनान्यूजनबाट